मदन भण्डारीको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ३, २०७६ टीका ढकाल
अहिले नेपाललाई नेतृत्व गरिरहेका धेरै वाम नेताका समकक्षी तर उनीहरूका पनि नेता थिए भण्डारी । र उनी बाँचिरहेका भए सायद उनैको नेतृत्व हुनसक्थ्यो भन्ने कल्पनाले उनैका समकक्षीलाई समेत भावनामा धकेल्ने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक व्यक्तित्वबारे उसैको स्मृति गरिने दिन केही लेख्नु झनै भावनाप्रधान हुनसक्ने जोखिम छँदै छ । तर भावुकता मात्रले समीक्षात्मक लेखनलाई न्याय गर्दैन ।
एमालेनिकट कतिपय लेखक र नेताहरूले भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) माथि विद्यावारिधिसम्मको शोध गरेका छन् । सार्वजनिक लेखनमा अधिकांशले उनको राजनीतिको ठोस समीक्षा गर्नुभन्दा उनको कठोर भूमिगत जीवन र संगठन कौशलका वर्णनमा धेरै समय खर्चेको देखिन्छ ।
उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देखाएको वैचारिक धारप्रति या त तीव्र समर्थन या तीव्र आलोचना छ । कम्युनिस्ट शुद्धतावादीहरूले उनको गतिशीलतालाई जबजको सुरुवाती समयमा संशोधनवादको आरोप लगाएर अध्ययन गर्नै अस्वीकार गरे ।
अझै गरिरहेकै छन्, तर त्यो घट्दो क्रममा छ । उनको पार्टी नेकपा एमालेले चाहिँं जबजलाई २०५४ को छैटौं महाधिवेशनदेखि नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्‍यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर अहिले निर्माण हुँदै गरेको नेकपाले भण्डारीका विचारलाई कसरी विकसित गर्दै लैजान्छ भन्ने कुराले नेकपालाई हेर्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ ।
पुष्पलालले स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यका रूपमा अन्यको जस्तै उनको पनि प्रारम्भिक उद्देश्य नेपालमा बलपूर्वक नौलो जनवादी क्रान्ति गरी कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्ने नै थियो । ‘बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ’ भन्ने माओत्सेतुङकोे भनाइ कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै उद्धृत गरिने मध्येको हो । यसले नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न हतियारबन्द संघर्षलाई एक मात्र माध्यम ठान्छ, जसलाई संसारका धेरै कम्युनिस्टले आफ्नो राजनीतिको प्रधान दीक्षाका रूपमा ग्रहण गरेका छन् ।
पुष्पलालले आफ्नो जीवनको अन्त्यसम्म नौलो जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने तर हतियारबन्द संघर्षका लागि परिस्थिति परिपक्व नभइसकेको व्याख्या गरे । वैचारिक रूपमा माक्र्स, लेनिन र माओबाट पर जान नसके पनि पुष्पलालको राजनीतिक विचारलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिको व्यवहारवादी पक्षले प्रभावित गरेको थियो । नेकपाको चार सिट मात्र भएको र कांग्रेसको दुई तिहाइ भएको, राजाद्वारा विघटित संसद पुन:स्थापना हुनुपर्छ, कांग्रेस-कम्युनिस्ट मिलेर प्रजातन्त्र स्थापनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पलालका विचार व्यवहारवादबाट जन्मेका हुन्, कम्युनिस्ट वैचारिकताको स्रोतबाट होइन ।
मदन भण्डारीले पुष्पलालबाट अलग्गिएर मुक्ति मोर्चा समूह बनाउनुको खास कारण ‘अगाडि पनि बढ्न नचाहने र पछाडि हट्न पनि सम्भव नहुने’ पुष्पलालकै लाइन थियो, जसबारे छुट्टै विश्लेषण आवश्यक पर्छ ।
कतिचाहिंँ भन्नुपर्छ भने तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले प्रजातन्त्र स्थापना गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणामा पुष्पलाल सही भए पनि बीपीले तिरस्कार गरिदिएपछि, भण्डारीका विचारमा, पुष्पलालको प्राथमिकता फुट्दै गरेका कम्युनिस्ट घटकलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेतर्फ हुनुपर्थ्यो । पार्टीका धेरै शीर्ष भनिएका नेताहरू पञ्चायत प्रवेश गरेका थिए ।
पार्टी संस्थापकका रूपमा एकताको अभिभारा पुष्पलालमाथि थियो । उनले अपेक्षित सफलता देखाउन नसकेपछि ध्रुवीकरण गर्ने क्रममा भण्डारी संलग्न मुक्ति मोर्चा समूह र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामेल झापा विद्रोहीहरूको क्रियाशीलतामा बनेको को-अर्डिनेसन केन्द्र बीचको एकताबाट नेकपा माले निर्माण भएको हो ।
भण्डारीले मालेको नेताका हैसियतले कांग्रेस-कम्युनिस्ट सहकार्य गर्न कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहलाई पहिलो जनआन्दोलनको कमान्डर बनाउनेदेखि संयुक्त वाममोर्चा निर्माणमा अग्रसरता लिएर बीपी-पुष्पलालपछिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति दिएको देखिन्छ ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४७ सालको संविधान निर्माणमा आफ्ना असहमति व्यक्त गर्न उनले अघि सारेका आलोचनात्मक समर्थनका सत्ताइस बुँदाले उनको महत्त्व थप स्थापित गर्छन् । तिनै बुँदाका वरिपरि वर्तमान नेपालको संविधान सम्बन्धी राजनीति घुमिरहेको छ ।
नौलो जनवादबाट जबजतिर
भण्डारीको राजनीतिले नेकपाका संस्थापक पुष्पलालको व्यवहारवादी विरासत बोक्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा माक्र्सवादका राजनीतिक पक्षको (माक्र्सवाद अर्थशास्त्र पनि हो) नेपाली अवधारणा निर्माण गर्छ ।
यसले माओद्वारा प्रयोग गरिएको मजदुर-किसान वर्गको संयुक्त हिंसात्मक हस्तक्षेपबाट स्थापित हुने सर्वहारा अधिनायकत्व सहितको नौलो जनवादी व्यवस्था परित्याग गर्न जबजलाई स्थापित गर्छ । जबजको अर्थशास्त्रीय पक्षमाथि भण्डारीका सीमित विवेचनाहरू छन्, जसबारे थप व्याख्या चाहिन्छ । सिद्धान्तत: तत्कालीन एमालेको राजनीतिक भाषामा जबज समाजवादोन्मुख प्रणालीको सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम हो ।
भण्डारीको विचारमा मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रणाली कुनै खास ‘वाद’ विशेषको एक्लो पुँजी नभएर मानवजातिले सयौं वर्षको संघर्षद्वारा प्राप्त गरेका उपलब्धि हुन् । त्यसैले जबजले तिनलाई ग्रहण गर्छ र वर्गीय चेतनाको माक्र्सवादी दर्शनका आधारमा श्रमजीवी जनताको पक्ष लिएर प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्थात जुन राजनीतिक कार्यसूचीलाई संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले ‘रणनीतिक’ उपयोगका लागि छुट्याएका थिए र छन्, तिनलाई जबजले सैद्धान्तिक प्रस्थापना बनाएको देखिन्छ ।
दार्शनिक आधारका रूपमा जबजको अर्को पक्ष बहुलताको अंगीकार हो । समाज, जीवन र प्रकृतिको बहुलतालाई फरक व्यक्तिका फरक विचारमा प्रतिविम्बित हुने नियमित गुण मानेर बहुलता र द्वन्द्ववादको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्य मौलिक लाग्छ । बनारसमा उनलाई प्राप्त पौरस्त्य चिन्तनको सान्निध्यका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । विकास (इभोलुसन) को प्रतिस्पर्धा प्रकृतिबाट सुरु हुन्छ र प्रतिस्पर्धा बहुलतामा मात्रै सम्भव हुन्छ ।
यसरी पुरातन कम्युनिस्टहरूले नस्विकारेको बहुलवाद तत्कालीन एमालेले आफ्नो बीज दर्शनमा स्विकार्‍यो । उग्र क्रान्तिकारिताबाट यात्रा सुरु गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो ठूलो परिवर्तन हो, साथै नेपालका सन्दर्भमा मुख्य दलहरूबीच घट्दो वैचारिक भिन्नताको द्योतक पनि ।
त्यसयता वैचारिक रूपमा मदन भण्डारीसँग असहमत हुने मोहनविक्रम सिंह वा नारायणमान बिजुक्छेले नेतृत्व गरेका वाम घटकहरूले व्यवहारमा बहुलताको अभ्यास गरिरहेकै छन् । एक समय मदन भण्डारीलाई संशोधनवादी वा विसर्जनवादी भएको आरोप लगाउने माओवादी पक्ष पनि अहिले उनको वैचारिक लाइनबाट प्रशिक्षित एमालेसँग एकता टुंगो लगाउने चरणमा छ ।
व्यवहारवादसँग विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई संश्लेषण गरेर आएको परिणामस्वरूप हुनुपर्छ, भण्डारीको प्राथमिकतामा हिंसात्मक संघर्ष देखिँंदैन । उनको जीवनको अनौठो संयोग के देखिन्छ भने हिंसालाई एकपल्ट राजनीतिक कार्यसूची बनाइसकेको र फेरि बनाउन चाहने दललाई नेतृत्व दिएर त्यसबाट अलग मात्र उनले गरेका छैनन्, आफूले समेत कुनै पनि हिंसात्मक संघर्षमा भाग लिएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरी नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान गर्ने बीपी कोइराला होऊन् वा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याउन अग्रसर भएका झापा विद्रोहीहरू, आफ्नो उद्देश्यलाई सजिलो पार्न कुनै न कुनै रूपले हिंसात्मक माध्यमको प्रयोग नेपाली राजनीतिमा सबैले गरे ।
धेरैलाई के थाहा छैन भने झापा विद्रोहका समयमा मदन भण्डारी पुष्पलालसँगै थिए, जहाँ हिंसात्मक संघर्ष हुनुपर्ने तर वस्तुस्थिति उपयुक्त नभैसकेको विश्लेषण थियो । त्यसको करिब २० वर्षअघि बीपीको हिंसात्मक संघर्ष ‘एक मात्र माध्यम’का रूपमा प्रयुक्त थिएन । बरु इतिहासको खास कालखण्डमा जहानियाँ निरंकुशतालाई परास्त गर्न अपनाइएको अल्पकालीन रणनीति थियो ।
‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’लाई चाहिँं माओवादी पार्टीहरूले रणनीति बनाउँछन्, जसको नेपाली स्मृति ताजै छ । मदन भण्डारीले पुष्पलालबाट अलग हुनासाथ अहिंसात्मक संघर्षद्वारा जनतालाई व्यापक रूपले गोलबन्द गर्दै नागरिक हस्तक्षेप सिर्जना गरी ल्याइने परिवर्तनमा आफूलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
भण्डारीका प्रशस्त राजनीतिक पाटाहरू छन्, जसबारे अझै चर्चा हुन बाँकी छ । केही पक्षबारे माथि चर्चा गरिसकेपछि उनको विचार लक्षित आलोचनाप्रति विचार गर्नु उपयोगी हुन्छ । आलोचनाको अध्ययन नेतृत्वको तिरस्कार होइन । जसरी माक्र्स, लेनिन वा माओ अथवा रसेल, कामु वा बीपीहरू सम्मानित थिए, तर पूर्ण थिएनन् ।
भण्डारी पनि सम्मानित छन्, पूर्ण होइन । यद्यपि जबजमाथि देशभित्रको उग्रवामपन्थी कोणबाट धेरै आलोचना छन्, जसले जबजलाई र नेपाली राजनीतिमा भण्डारीको योगदानलाई पूरै खारेज गर्न खोज्छ । आज देशको नेतृत्व गरिरहेको दलले मार्गदर्शक ठानेको विचारलाई खारेज गरेर राजनीति बुझ्ने प्रयास गर्नु लहड मात्रै हुन जान्छ ।
त्यसो त उग्रवामपन्थले आलोचना गर्न आफूबाहेक कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन । ती आलोचनाहरू विषयवस्तु केन्द्रित हुनेभन्दा क्रान्तिकारी शब्दजालमा ज्यादा आधारित हुन्छन् । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पुरानै रोग हो यो ।
नेकपा एमाले भित्रैबाट सुरुवातमा झलनाथ खनाल र निरन्तरचाहिँं घनश्याम भुसालले जबजका सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे बहसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भुसालले उठाउने विमर्शमा जबजले पुँजीपति वर्गसमेतको सहकार्यमा पूरा गरेको भनिएको पुँजीवादी-जनवादी राजनीतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न कस्तो अर्थराजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई प्रधान बनाइएको छ ।
जबजको अर्थशास्त्र माक्र्सको सैद्धान्तिक मान्यताबाट धेरै टाढा पुगेको दाबी गर्दै भुसालले जबजको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएर नयाँ गन्तव्य लिनुपर्ने ‘व्यक्तिगत’ धारणा अघि सारेका छन् । नेकपाको लोकतान्त्रिक प्रामाणिकता कायम राख्ने हो भने भुसालले भनेजसरी मदनको विचारलाई बेवास्ता गरेर माक्र्सवादी जडसूत्रतिर फर्कन आजको नेकपालाई सम्भव देखिंँदैन ।
भण्डारीबारे थप अर्थपूर्ण आलोचना खोज्दै जाँदा अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयका मानवशास्त्री स्टेफेन माइकसेल फेला पर्छन् । माइकसेलले २०५१ को आसपास अंग्रेजी भाषाको ‘हिमाल’ म्यागाजिन (हाल प्रकाशन हुँदैन) मा पेरुका माओवादी नेता गोन्जालोप्रति नेपालका युवामा देखिएको आकर्षणबारे लामो लेख लेखेका थिए ।
त्यस विवेचनाद्वारा उनले नेपालमा पेरुकै प्रकृतिको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व हुनसक्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए, जुन एक वर्ष नहुँदै मिल्न पुग्यो । उनले जबजको आलोचना गर्दाचाहिँं आफूलाई शुद्धतावादी कम्युनिस्टको कित्तामा उभ्याएका छन् (जुन उनी होइनन्) ।
एकातिर उनी जबजले माओका विचारलाई तोडमोड गरेर बरबाद गरेको भन्छन् भने अर्कातिर कम्युनिस्ट परिभाषाको प्रजातन्त्रलाई अपूर्ण भन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जबजले संसदीय निर्वाचनको चक्रमा अल्झाएर क्रान्तिबाट विमुख गर्छ र पुँजीपति वर्गको स्वार्थमा समर्पित गर्छ पनि भन्छन् । माइकसेलले बेवास्ता गरेको पक्ष के हो भने भण्डारीले माओवादबाट पार्टीलाई पृथक गर्न जानाजान नौलो जनवादी बाटोबाट आफूलाई जबजतिर मोडेका हुन् ।
माओले चीनमा पाएको सफलता चीनकै विशेष अवस्थाको उपज भएकाले त्यो बाटोबाट नेपाली क्रान्तिचाहिंँ नहुने निष्कर्षमा भण्डारी नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनकै आसपासतिर पुगेका थिए । माइकसेलले सुझाएका बाँकी दुई विषयमा भने आजको सत्तारूढ नेकपाले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्नेछ ।
नेकपाको सरकारले आज लिएका नीति तथा विकास कार्यक्रममा उसका अग्रजका मार्गनिर्देशनहरू के कति सामेल छन् भन्नेतिर गहिरो बहस हुनुपर्छ । बलियो सरकार र पार्टीले आफ्ना वैचारिक आदर्श पछ्याएर नागरिकको सेवामा पूर्णरूपले समर्पण गरिसकेको हुनुपर्ने हो । नेकपा केवल एउटा चुनावदेखि अर्काे चुनावसम्म जाने भुत्ते राजनीतिक दल बन्ने हो वा बृहत सामाजिक हितको आदर्श पछ्याउन सक्ने कार्यकर्ता आधारित संगठन तथा क्षमता निर्माण गर्दै जाने हो ?
आदर्शले नै कुनै पनि पार्टी संगठनलाई नैतिक बनाइराख्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो उद्देश्यप्रति सचेत राख्छ । आजको राजनीतिमा देखिएको तीव्र मूल्य स्खलन विचारको संकटबाट उब्जिएको हो ।
संसद र सडकको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्नुपर्ने पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएका बेला उनैको सम्बोधनबाट ‘असंसदीय’ शब्द हटाउने निर्देशन संसदले पाएको छ । सिंहदरबारबाट नदेखिए पनि सरकार र नागरिकबीच दूरी स्पष्ट रूपले बढेको छ । मदन भण्डारीलाई सम्झने दिन नेकपाभित्रको राजनीतिक विमर्शले हाल सामना गर्नुपर्ने वा गरिरहेका चुनौतीको गाम्भीर्य पहिल्याउन सक्ला ?
तीन करोड नागरिकलाई त्यस पार्टीको हातमा देशको भविष्य सुरक्षित भएको सन्देश दिन सक्ला ? लाखौँ कार्यकर्ता जो विभिन्न कारण र संयोगले नेकपासँग गाँसिएका छन्, उनीहरूलाई पार्टीको स्वस्थ राजनीतिप्रति आश्वस्त बनाउन सक्ला ? प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०४
घरेलु हिंसाको घनचक्कर
जेष्ठ ३, २०७६ सञ्जिला तामाङ
पछिल्लो समय घरेलु हिंसाका घटना दिनदिनै सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । तिनले सबैलाई झस्काउने गरेका छन् । आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट भएका हत्या, जिउँदै जलाउने, कुटपिट गर्ने, तातोपानी खन्याउने, घरनिकाला गर्ने जस्ता घटना सुन्दा कसको आङ सिरिङ्ग नहोला र ! यस्ता घटनाबाट सबैभन्दा बढी महिलाहरू पीडित हुने गरेका छन् ।
हिजोआज घरनिकाला गरिनु, जिउँदै जलाइनु वा जलाउने प्रयत्न गरिनु र घर-परिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातनाको सिकार बन्नु महिलाको नियति नै बन्ने गरेको प्रतीत हुन्छ ।
परिवारका एक वा धेरै सदस्यले परिवारको अर्को सदस्यलाई नियन्त्रणमा राख्न शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक रूपमा पीडा दिनु घरेलु हिंसा हो । शारीरिक, मानसिक तथा यौन दुव्र्यवहार सहँदै गएपछि त्यसले गम्भीर रूप लिएर व्यक्तिको ज्यानै जाने वा परिवार विखण्डन हुने अवस्था आउने गर्छ ।
ओरेकले हालै सार्वजनिक गरेको त्यस्ता घटनाहरूको विस्तृत विश्लेषणले ६५ प्रतिशत महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको देखाएको छ । त्यस अनुसार, महिलामाथि सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमानबाट ५३ प्रतिशत र घर-परिवारका अन्य सदस्यबाट १७ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ ।
प्रहरीको तीन वर्षको तथ्यांकले पनि फरक अवस्था देखाएको छैन । प्रहरीका अनुसार आव २०७४/७५ मा घरेलु हिंसाका १२ हजार २ सय २५ घटना दर्ता भएका छन् भने आव २०७३/७४ मा ११ हजार ६ सय २९ । आव २०७२/७३ मा ९ हजार ३ सय ९८ त्यस्ता दर्ता भएका छन् । यसले घरेलु हिंसाका घटना हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखाउँछ । यसले महिला हिंसाका घटनामध्ये घरेलु हिंसा धेरै हुने गरेको पनि छर्लंग पार्छ । घरेलु हिंसापछि बलात्कार र बहुविवाहका घटना अधिक छन् ।
तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा, महिलाहरू आफ्नै घरमा र आफ्नै परिवारका सदस्यबाट सबैभन्दा बढी असुरक्षित छन् । महिला हिंसाको मूलथलो घरपरिवार रहेको देखाउँछ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने घर नै हत्या, हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, बोक्सी, छाउपडी प्रथाजस्ता जघन्य अपराधका मूलथलो हो, जहाँबाट यस्ता घटनाहरू जन्मन्छन्, जन्माइन्छन् र जन्मिइरहेका छन् । यस्ता घटनाको विश्लेषण गर्दा घरपरिवारसम्म पुग्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको घरपरिवारको प्रकृति कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन हो ।
त्यसो भए हाम्रो घर किन असुरक्षित बन्दै गएको छ त ? यसका लागि सबैभन्दा पहिले घरको अवधारणा नै कहाँबाट आयो भन्ने हेर्नुपर्छ । सिकारी युग हुँदै कृषि युगमा आइपुग्दा मानिसले बिस्तारै परिवार बसाउन सुरु गर्‍यो । अनि विवाह, व्यक्तिगत सम्पत्ति, निजी स्वामित्व र लैंगिकताका आधारमा कामको बाँडफाँड सुरु भयो । पुरुषहरू व्यक्तिगत जीवनबाट सार्वजनिक जीवनमा आएपछि घरको जिम्मा पूरै महिलाहरूको हातमा पुग्यो । पुरुषहरू घरबाहिर आए, तर महिलाहरू घरभित्रकै काममा मात्र सीमित भए । यसरी भएको परिवर्तनले पुरुषलाई घर बाहिरको काममा प्रेरित गर्‍यो भने महिला घरभित्र र बाहिर पनि मात्र सहयोगीका रूपमा आउन थाले । परापूर्व कालबाटै सुरु भएको त्यो प्रक्रिया अहिले पनि कायमै छ ।
घरको स्वामित्व, जो घरको मुख्य मान्छे हो, त्यहीसँग हुन्छ । घरको मुख्य मान्छे त्यही हुन्छ, जसले कमाएर ल्याउँछ, घर व्यवहार चलाउँछ, निर्णय गर्छ । त्यो भनेको धेरैजसो पुरुष नै हुन्छन् । घरको स्वामित्व पहिला बाजे, अनि बुबा र त्यसपछि छोरामा हस्तान्तरण हुँदै जान्छ । घरको स्वामित्व महिलाको हातमा आउने अवसर एकदमै कम हुन्छ । त्यसैले घरको स्वामित्व पुरुषको पकडमा हुनुलाई महिला घरेलु हिंसामा पर्नाको मुख्य कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा महिलाहरू घरको मुख्य मान्छेबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छन् ।
ओरेकको तथ्यांक अनुसार, घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिलामध्ये ३५ प्रतिशतको १६ वर्षभन्दा कममा र ५९ प्रतिशतको १७ देखि २५ वर्षबीच विवाह भएको पाइन्छ । यो तथ्यले देखाउँछ— बालविवाह र कम उमेरमा हुने विवाह घरेलु हिंसाको अर्को कारक तत्त्व हो । सानैमा विवाह भएका महिला राम्रो पढ्न र कमाइ गर्न नसक्ने हुन्छन् । चाँडै बच्चा जन्मिने भएकाले शारीरिक रूपमा कमजोर हुने, बूढोजस्तो देखिने अनि उमेर पुगेपछि श्रीमान र श्रीमतीबीचका इच्छा र चाहनाहरू नमिल्ने हुन जान्छ । एक त श्रीमानमाथि पूर्ण आश्रित र अर्कोतिर दुईबीचको चाहनामा बेमेल, अनि हिंसा सुरु हुन्छ ।
हिंसाको मुख्य जरो लिंगका आधारमा कामको बाँडफाँड हुनु पनि हो । परम्परागत मूल्य-मान्यताबाट निर्देशित हाम्रो पारिवारिक संरचनाले महिलाको शरीरमाथि अरूको नियन्त्रण कायम गर्ने प्रणालीको प्रतिपादन गरिरहेको छ । उनीहरूमाथि परिवार र समाज हावी हुन्छ । त्यसैले असन्तुलित शक्ति संरचना, परम्परागत मूल्य-मान्यता र सामाजिक संरचनाले पुरुषलाई प्रधान तथा महिलालाई सहायक भूमिका दिएको छ । यसैले महिलामाथि नियन्त्रण कायम राख्न घरेलु हिंसा एउटा माध्यम बनेको छ । घरपरिवारको उत्पादन प्रणाली, आय स्रोत, सम्पत्ति, चेतनाको स्तरले पनि महिलामाथि हुने हिंसामा प्रभाव पार्छ ।
विकासका सूचकांकका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि महिलाहरू पछाडि छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता कम छ । अझ पहुँचलाई हेर्ने हो भने नगण्य छ । महिलाहरूको उत्पादनमूलक स्रोतसाधनहरूमा पहुँच र नियन्त्रणको कमी, शिक्षा र चेतनाको अभाव, राज्यद्वारा बनाइएका कानुनहरू महिलामैत्री नहुनु र भएको कानुनको सही कार्यान्वयन नहुनुले गर्दा यस्ता हिंसाको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
महिला हत्या, हिंसा र बलात्कार अहिले मात्रै हुने गरेका होइनन् । यस्ता घटना हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भइरहेका छन् । विगतमा यस्ता घटना सार्वजनिक हुन्नथे, अहिले चेतना, सञ्चारमाध्यमको पहुँच, पीडितको बढ्दो आत्मबलका कारण त्यति छोपिन नपाएका मात्र हुन् । शारीरिक यातना मात्र हिंसा होइन । भेदभाव, अस्वतन्त्रता, असमानता, स्रोतसाधनमा असमान पहुँच, डर, शोषण पनि हिंसा नै हुन् । घरभित्र पनि असमानता छ, भेदभाव छ, स्वतन्त्रता छैन, जसले दमनकारी पारिवारिक संरचनालाई निर्माण गर्छ ।
देशमा विद्यमान प्रमुख समस्यामध्ये पारिवारिक हिंसाको समस्या प्रमुख मुद्दाका रूपमा देखा परेको छ । महिलाविरुद्ध हुने घरेलु हिंसा विभिन्न वर्ग, जातजाति, धर्म, उमेर, लिंग, समाज र जीवनशैली अनुसार फरक-फरक तरिकाबाट हुने गर्छ । तर यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा सबैतिर छ । तराईमा, खास गरी मधेसी समुदायमा, दाइजोको समस्या छ । त्यहाँ दाइजोकै नाममा महिलाले शारीरिक-मानसिक यातना सहनुपर्छ ।
फ्याक्ट नेपालको हालसालैको रिपोर्टले पनि घरेलु हिंसा २ नम्बर प्रदेशमा बढी हुने गरेको देखाएको छ । पहाडका महिलाहरू सामान्यतया दिनभरि घाँस-दाउरा गर्छन्, खेतबारीमा काम गर्छन् । श्रीमान भने जुवातास खेलेर बस्ने गर्छन्, अनि राति आएर श्रीमती कुट्ने गर्छन् । सहरी क्षेत्रमा महिला-पुरुष काममा समान जोतिने त गर्छन्, घरभित्रको काम भने महिलाले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । तैपनि श्रीमान समयमा घर नआउने, मादक पदार्थ खाएर आउने अनि यातना दिने घटना बढी देखिएका छन् ।
वर्ग अनुसार पनि हिंसाको प्रकृति फरक पाइन्छ । निम्न वर्गका पुरुषहरू दिनभरि ज्याला-मजदुरी गर्ने अनि राति रक्सी खाएर झगडा गर्ने, होहल्ला गर्ने, पिट्ने गर्छन् । मध्यम र उच्च वर्गमा मानसिक समस्या एवं यातना बढी हुन्छ, उनीहरू इज्जतलाई प्रधानता दिन्छन्, त्यसैले इज्जतको डरले भरसक घटना घरभित्रै सामसुम पार्छन् । यो त्यति बेला विस्फोट हुन्छ, जब सबै कुरा बिग्रिइसकेको हुन्छ ।
घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा हिंसाका घटना भरसक बाहिर आउँदैनन् । हिंसा भएको कुरामा माइती, घर, छिमेकी र आफन्तहरू सबै जानकार हुँदाहुँदै पनि कोही बोल्दैनन् । यस्तो त भइहाल्छ, यो त घरझगडा, लोग्ने-स्वास्नीको झगडा परालको आगो, त्यसको कर्म नै त्यस्तै रहेछ भन्नेजस्ता मिथकलाई आधार मानी यिनलाई प्राय: समस्याका रूपमा लिने गरिँदैन । महिलामाथि हुने हिंसा, विशेषत: घरेलु हिंसालाई निजी र नितान्त घरभित्रको मामिलाका रूपमा मात्र लिइएको छ । घरेलु हिंसा हालसम्म पनि गम्भीर सार्वजनिक सवालका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०२